QM oo sheegtay in 7.7 milyan Soomaali ah ay u baahan doonaan gargaar - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka QM oo sheegtay in 7.7 milyan Soomaali ah ay u baahan doonaan...
QM oo sheegtay in 7.7 milyan Soomaali ah ay u baahan doonaan gargaar
Wakiilka Gaarka ah ee Xog-haya Guud ee QM u qaabbilsan Soomaaliya James Swan ayaa Golaha Ammaanka uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya isaga oo ay wehliyaan madaxa AMISOM Danjire Francisco Madeira iyo Caasha Siyaad oo ka mida aasaasayaasha Hindisaha Hogaamineed ee Haweenka Soomaaliyeed, isaga oo soo dhaweeyey horumarka ilaa hadda la gaaray waxa uuna boorriyey in si dhaqse ah loo dhameystiro doorashooyinka Golaha Shacabka.
Mudane James Swan waxa uu soo jeediyey in liiska kuraasta loogu qoodeeyey haween la baahiyo iyo in xaqiijinta qoondada boqolkiba 30 ee haweenka la gaaro; waxa uu ku carrabka ku adkeeyay in ka qeyb galka iyo metelaadda siyaasadda ee haweenku muhiim u tahay horumar iyo nabad waarta oo ay Soomaaliya hesho.
Dib-u-dhacyada socda ah ee geeddi-socodyada doorashada ayaa sii wada inay hakiyaan horumarradii laga sameeyay hortebinnada qaranka oo ay ka mid yihiin dowladnimada, ammaanka iyo horumarka, ayuu yiri Mudane James Swan Wakiilka Gaarka ah ee QM.
Xaaladda bini’aadamnimo ee Soomaaliya ayaa weli ah mid aad u xun, waxaana u sii dheer colaado joogto ah, barakac iyo jahawareerka cimilada ayuu yiri Mudane James Swan Wakiilka Gaarka ah ee QM. Qiyaastii 7.7 milyan oo Soomaali ah ay u baahan doonaan gargaar bini’aadannimo sanadka 2022.
Previous articleQarax Goordhaw Ka Dhacay Magaalada Guriceel
Next articleDowladda Soomaaliya oo cambaareysay qaraxyadii ka dhacay Uganda